Waxay gacan ka xaqdarani ku dishay magaalada Melbourne 12 kii bisha Jun Allaha unaxariisto ee Halgame Abdulahi Bashir (Abdulahi Yare) waxaan u tacsiyeenaynaa dhamaan ehelkii iyo qarabadii marxuumku kabaxay iyo OYSU Melbourne.
Abdulahi Bashir wuxu Ka mid
ayaa hogamiyasha oysu Melbourne, wuxuu u qabilsana dhankaa warfaafinta, arrimaha bulshada iyo dhexgalka heyadaha xaquuqul insanka. Wuxuu aha wil wax bartay, wuxu dhoorjeer socdal Ku tagaya Guriga dowlada Australia asago ka hadlayaa dhibka lagu hayo shacabka reer ogadenia. Wuxuu gacan weyn Ka geystay shir weynihi jaaliyadka Ogadenia ee Australia lagu qabtay. Wuxu Ka mid ahaa dhalinta ugu firfircoon dhanka wax qabadka oysu ee pacific Ilahay ha u naxaristo Aamin. Ururka dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia waxay tacsi u dirayaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday sidookale waxaan u tacsiyeenaynaa OYSU Melbourne iyo Jaaliyada sigaar ah oo xubin qaali ah ka baxay. Samir iyo imaan Allaha inaga wada siiyo isagana ilaahay ha ushafeeca qaado Amin.